Guryaha korontada laga buuxiyo ee ay ka buuxaan hal-abuurka uu farshaxan kasta jeclaan lahaa inuu helo | Abuurista khadka tooska ah
Christina Zapata | | Dhiirrigelinta
«Guri yar oo Funky ah oo ku yaal degmada Paseo» ee Cassi LJ waxaa ruqsad ka haysta CC BY 2.0
Cunnooyinka fadhiga, miisaska qaabka warshadaha, sawirro badan oo midabbo kala duwan leh oo ku dhegsan derbiyada, roogagga leh naqshadaha joomatari, dhirta geesaha qurxisa ...
Korontada waxay ku saleysan tahay isku dhafka walxaha qaabab iyo waqtiyo kala duwan, helitaanka dhiirigelin ilo badan oo kala duwan oo laga yaabo ama aan xiriir la lahayn midba midka kale, habkaas oo loo abuuro natiijo qurxan oo asal ah oo asal ah, iyadoo la raacayo shakhsiyadda qofka qabta.
Ereyga eclectic wuxuu ka yimid Griigga oo macnihiisu yahay 'la doortay', tan iyo farshaxanku wuxuu doortaa waxa ugu xiisaha badan inuu matalo dhammaan dhaqdhaqaaqyada farshaxanka. Qaab aan si xor ah u dareemeyno inaan ku horumarinno hal-abuurnimadeenna oo aan sidaas ku buuxinno gees walba oo gurigeenna ah Waxyaabaha qaabdhismeedka, qaabdhismeedka, midabka ... fursadaha aan dhammaadka lahayn.
Waxaa muhiim ah in isticmaalka qalabka koronto uu leeyahay dheelitir qurxan oo gaar ah, taas oo ah, in culeys badan oo bilic leh aan lagu abuurin isku dhafka dhammaan walxaha.
Kadib aan aragno tusaalooyinka guryaha shaqsiyadeed ee ku guuleysanaya shabakadaha. Mid kasta oo ka mid ah, isku darka walxaha kala duwan wuxuu abuuraa jawi ka turjumaya hal-abuurka qolalka oo dhan. Waa guryo ku habboon dhiirrigelinta faneed, nama yeeli doonaan in aan murugo daqiiqad ah!
1 Guriga Rachael Havenhand
2 Guriga Tasha oo ka socda Mashaariicda Pocket Pretty
3 Kim's House by Midab Kimmes
Guriga Rachael Havenhand
Rachael Havenhand waa farshaxaniste Ingiriis ah oo gurigeedu yahay waraaqdeeda ugu fiican. Gudihiisa waxaan ku arki karnaa farxad meel kasta. Midabada casaanka iyo lilac ee darbiyada ayaa istaaga, codadka jaceylka ah ee sida saxda ah loogu daro fadhiga turquoise. Si loola barbardhigo midabada aasaasiga ah, farshaxanku wuxuu adeegsadaa astaamo joomatari midabyo badan leh oo ku yaal roogagga, marada miiska iyo meelaha qaarkood ee derbiga. Intaas waxaa dheer, waxaan daawan karnaa jiritaanka barkimooyin tiro badan, taas oo noo horseedeysa qaab bohemian ah oo inbadan guriga ka taliya. Darbiyada dushiisa, oo ay ka buuxaan sawirro in yar ka sii yar aan ku arki karno shakhsiyadda farshaxanka, waxaan ku aragnaa ujeeddooyinka reer Mexico, tixraacyada filimada, qaababka muusikada iyo farshaxanada sida Frida Kahlo Yaan rabin inuu halkaan ku noolaado?
Guriga Tasha oo ka socda Mashaariicda Pocket Pretty
Guri kale oo ay ka muuqato hal-abuur waa Tasha. Gurigan ayaa ka sarreeya dhammaantiis jikadiisa asalka ah, kaas oo isku daraya codadka lilac ee darbiga iyo sumadda qalabka guryaha. Tan waxaa weheliya miis midabbo badan leh oo leh diiwaanno vinyl ah oo tilmaamaya halka martida kasta ay tahay inuu fariisto. Mawduucyada joomatari ayaa sidoo kale ka dhex muuqda, sida aan ku arki karno sawirrada madow iyo caddaan ee darbiga iyo leydirada qalabka korontada. Maxaa intaa ka badan, jaranjarada waa mid asal ah oo dabeecad leh. Halkan waxaad ku arki kartaa joomatari, si qumman isugu dheellitiran qurxinta guriga intiisa kale. Maxaa ka koror badan jaranjaradaas?
Kim's House by Midab Kimmes
Hal abuurka Kim wuxuu na tusayaa gurigeeda cajiibka ah, meesha curiyaha ugu caansan waa musqusha. Waxaan aragnaa marmarka qaabka-guridda oo midab kala baxaya, oo abuuraya jawi farxad iyo soo dhaweyn leh. Qolkeeda fadhiga sidoo kale waa mid asal ah, oo leh dhir, barkimooyin fara badan oo midabbo leh iyo rooga weyn ee la jejebiyey, walxaha kiciya qaabka bohemia. Joogitaanka barkin naqshadeynta mandala waxaa loola jeedaa farshaxanka Hindu. Geesaha kale ee guriga ayaa na tusaya roogaga guridda. Darbiyada buluugga ah ee buluugga ah waxay ka soo horjeedaan tiro badan oo sawirro midabbo badan leh oo muujinaya muuqaalka gudaha ee Kim, halkaas oo aan ku arki karno tixraacyo farshaxanno sida Frida Kahlo mar kale. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku arkeynaa waxyaabo dabiici ah oo ah qaabka bohemia ee dhirta, iyo sidoo kale qalabka guryaha ee alwaax ama baaquli miraha ku jirta bartamaha miiska.
Vintage, hippie, bohemian, Arab, Nordic, minimalist elements ... kuwa kugu dhiirigeliya inta badan oo kaa buuxiya firfircoonida iyo jawiga wanaagsan ayaa ah kuwa sida ugu fiican ugu biiri doona gurigaaga koronto. Maxaad sugeysaa inaad bilowdo abuuritaankeeda?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Guryo koronto leh oo ay ka buuxaan hal-abuur ay farshaxan kastaa jeclaan lahaa inuu helo
Fowdo saafi ah ayaa ah qaabkan tareenka adduunka "tareenka"